Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Faraca Muftaaxul-xoriyo oo Maanta Ifo Kaqabsoomay.
Shirkii Faraca Muftaaxul-xoriyo oo Maanta Ifo Kaqabsoomay.
Maanta oo ah maalinimo jumco ah taariikhduna kubeegantahay 30/12/2016 waxaa kulankoodii caadiga ahaa ee billaha ahaa isugu yimid xubnaha faraca maftaxul.xorriyo ee jaaliyada bariga Africa ee Ogadenia (JABSO) laanta kahawlgasha xerada Qoxootiga IFO ee deegaanka Dhadhaab.
Kulanka oo u muuqday mid si heersare ah loosoo agaasimay looganasoo shaqeeyay sidii loobaahnaa ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhamaan xubnaha,
maamulka iyo hawlwadeenada faraca iyo sidoo kale xubno kale oo katirsan masuuliyiinta JWXO.
warbixin iyo kalawar qaadasho dheer kadib kulanka ayaa lagusoo bandhigay Qodobo aad ugudo ballaadhan kana turjumaya xaalada rasmiga ah ee maanta kataagan guud ahaan geeska Africa ama 0gadenia iyo Ethopia waxaana qodobadaasi dood iyo falanqayn ballaadhan kadib kasoo baxay talooyin muhiim ah iyo go,aamo lagaadhay.
Guntii iyo gabagabadii kulanka ayaa laguwada dardaarmay in guntiga dhiisha la iskaga dhigo dhaxdana looxidho sidii loodhicin lahaa ciida dahabka ah ee ogadenia loogana guulaysan lahaahgumaysiga taagta daran ee wakhtigiisii dhamaaday.wuxuuna kulankukusoo dhamaaday jawi dagan iyadoo xubnaha wajigoodana lagadheehanayay qiiro wadaniyadeed.